မုဒိမ်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းသန္တာန် - For her Myanmar
မုဒိမ်းမှု ဘာလို့ဖြစ်လဲ နားလည်ဖို့ဆိုရင် မုဒိမ်းသမားတွေရဲ့ စိတ်ကို အရင်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
1976 ခုနှစ်တုန်းက Claremont Graduate University ရဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr.Smithyman ဟာ အထက်ပါကြော်ငြာကို Los Angeles မြို့ထုတ် သတင်းစာတွေမှာ ထည့်လိုက်တုန်းကတော့ သူ့ကို ဆက်သွယ်လာမယ့်လူ တစ်ယောက်တောင် ရှိလာပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေခဲ့တာပါ။ တကယ့်တကယ်တော့ လူအယောက် ၂၀၀လောက် သူ့ကို ဆက်သွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အင်တာဗျူးအခု၅၀လောက် လုပ်အပြီးမှာတော့ အဲ့ဒီမုဒိမ်းကောင်တွေရဲ့ ကိုယ်စိတ်အပြုအမူဟာ သူလိုကိုယ်လို သာမာန်လူတွေပဲ ဖြစ်နေကြပြီး၊ သူတို့တွေရဲ့ မိသားစု၊ အလုပ်အကိုင် စသည်တို့ဟာလည်း မတူကြတာကို Dr. Smithyman တွေ့ရှိလာရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခြေအနေ လုံးဝကွဲပြားကြပေမဲ့ သူတို့ မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်လာဖို့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အခြေအနေအချို့ကိုတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် တူညီတဲ့အချက်တွေ ဆွဲထုတ်ကြည့်လို့ရကြောင်း သူရဲ့ ပါရဂူစာတမ်း “The Undetected Rapist” မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Related article >>> သွေးအေးလွန်းတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအတွေးအခေါ်
သူ့အဆိုအရတော့ မုဒိမ်းကောင်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာ လူမျိုး၊ အဆင့်အတန်း၊ အိမ်ထောင်ရေး စတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ မဆိုင်သလောက်ဖြစ်ပြီး သူတို့ အားလုံးနီးပါးမှာ တွေ့ရတဲ့ တူညီတဲ့အချက်ကတော့ မုဒိမ်းကောင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားဟာ သူတို့တွေ ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ကိန်းအောင်းနေတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ အထင်ရှာဆုံး စိတ်နေစိတ်ထားတစ်ခုကတော့ သူတို့တွေ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံကြပေမဲ့ သူတို့ဟာ မုဒိမ်းကောင်တွေပါလို့ လက်မခံကြတာပါတဲ့။
ပြောချင်တာကကွာ ရည်းစားဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အီစီကလီလုပ်နေတဲ့ ကောင်မလေးကိုဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက်ပြီး လိင်ကိစ္စရယူလိုက်ပေမဲ့ ဒါက မုဒိမ်းမှုမြောက်တယ်လို့ လက်မခံကြတာပါ။ သူကမူနေလို့ အတင်းရယူလိုက်ရတယ် ဆိုတာမျိုး ဆင်ခြေပေးကြတာပါ။
University of California က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုကို နှစ်ပေါင်များစွာ လေ့လာခဲ့တဲ့ စိတ်ပညာရှင် Neil Malamuth ကပြောတာကတော့ ထောင်ကျနေတဲ့ ရာဇဝတ်သားတွေဟာ ဘာလာလာဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပါတဲ့။ သူတို့ဟာ တီဗွီခိုးမယ်၊ လက်ပတ်နာရီခိုးမယ်၊ ကားခိုးမယ် အဲ့ကနေမှ လိင်ကိစ္စကို ခိုးချင်ခိုးပါလိမ့်မယ်။ အဲ… တကယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုကိုပဲ ကျူးလွန်တဲ့ မုဒိမ်းကောင်တွေကတော့ ထောင်မကျကြတာ များပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့တွေ ပိုအတင့်ရဲနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို အဓိကထားပြီး ကောက်ထားတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ မုဒိမ်းကောင်တွေဟာ ခပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေ ပြကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အထက်တန်း (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်နှစ်အစောပိုင်းတွေမှာကတည်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ပါးသူတွေ လက်မခံနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ပြကြပါတယ်။ ချစ်သူက ဆိတ်ကွယ်ရာခေါ်သွားပြီး အလိုမတူဘဲ ကိုင်တွယ်တာမျိုး၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မဖွယ်မရာ ထိတွေ့မှုတွေ လုပ်တာမျိုးပေါ့။ တချို့ကတော့ တစ်ခါနှစ်ခါလောက် အပြီးမှာ ရပ်သွားကြပေမဲ့၊ တချို့ကတော့ ဆက်လက်ပြုမူတတ်ကြတယ်။ တချို့များဆို ပိုလို့ အတင့်ရဲလာပြီး မုဒိမ်းကောင်ဖြစ်လာကြပါတယ်။
Related article >>> တွစ်တာအသုံးပြုသူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပြောပြတဲ့ မုဒိမ်းမှုအကြောင်း
Wayne State University က လူမှုစိတ်ပညာရှင် Antonia Abbey ရဲ့သုတေသနတစ်ခုအရမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတစ်ယောက်က သူ့အပြုအမူကို ဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ် –
“ကျွန်တော့ကို လိင်စိတ်ကြွလာအောင် လုပ်တဲ့အတွက် သူ(မ)ကို ပြန်ပေးဆပ်ခိုင်းတာပါ”
ဒီအကြောင်းပြချက်ကို ကြားဖူးနေတယ် မထင်မိဘူးလားဟင်? ဘယ်လောက်တောင် အဓိပ္ပာယ်မရှိပြီး ကြောက်စရာကောင်းလိုက်သလဲလို့… နောက်ဆုံး ပြောချင်တာက ယောင်းတို့ရယ်… လူဆိုးဆိုတာက ချိုလည်းပေါက်မနေ၊ နဖူးမှာလည်း စာမရေးထားဘူးမလား… ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမဆို မုဒိမ်းကောင်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်လို့…
အန္တရာယ်ကင်းပြီး လှပတဲ့ ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Khine (For Her Myanmar)
References : New York Times | The Daily Universe
မုဒိမျးမှု ဘာလို့ဖွဈလဲ နားလညျဖို့ဆိုရငျ မုဒိမျးသမားတှရေဲ့ စိတျကို အရငျနားလညျထားဖို့လိုပါတယျ။
1976 ခုနှဈတုနျးက Claremont Graduate University ရဲ့ ပါရဂူဘှဲ့ကြောငျးသား တဈယောကျဖွဈတဲ့ Dr.Smithyman ဟာ အထကျပါကွျောငွာကို Los Angeles မွို့ထုတျ သတငျးစာတှမှော ထညျ့လိုကျတုနျးကတော့ သူ့ကို ဆကျသှယျလာမယျ့လူ တဈယောကျတောငျ ရှိလာပါ့မလားလို့ စိတျပူနခေဲ့တာပါ။ တကယျ့တကယျတော့ လူအယောကျ ၂၀၀လောကျ သူ့ကို ဆကျသှယျခဲ့ကွပါတယျ။
အငျတာဗြူးအခု၅၀လောကျ လုပျအပွီးမှာတော့ အဲ့ဒီမုဒိမျးကောငျတှရေဲ့ ကိုယျစိတျအပွုအမူဟာ သူလိုကိုယျလို သာမာနျလူတှပေဲ ဖွဈနကွေပွီး၊ သူတို့တှရေဲ့ မိသားစု၊ အလုပျအကိုငျ စသညျတို့ဟာလညျး မတူကွတာကို Dr. Smithyman တှရှေိ့လာရပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အခွအေနေ လုံးဝကှဲပွားကွပမေဲ့ သူတို့ မုဒိမျးကောငျဖွဈလာဖို့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အခွအေနအေခြို့ကိုတော့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ တူညီတဲ့အခကျြတှေ ဆှဲထုတျကွညျ့လို့ရကွောငျး သူရဲ့ ပါရဂူစာတမျး “The Undetected Rapist” မှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
Related article >>> သှေးအေးလှနျးတဲ့ လူသတျသမားတဈယောကျရဲ့ စိတျဝငျစားစရာအတှေးအချေါ
သူ့အဆိုအရတော့ မုဒိမျးကောငျတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ဆိုတာ လူမြိုး၊ အဆငျ့အတနျး၊ အိမျထောငျရေး စတဲ့အခကျြအလကျတှနေဲ့ မဆိုငျသလောကျဖွဈပွီး သူတို့ အားလုံးနီးပါးမှာ တှရေ့တဲ့ တူညီတဲ့အခကျြကတော့ မုဒိမျးကောငျတဈယောကျရဲ့ စိတျနစေိတျထားဟာ သူတို့တှေ ခပျငယျငယျကတညျးက ကိနျးအောငျးနတောလို့ ဆိုပါတယျ။ အဲဒီထဲကမှ အထငျရှာဆုံး စိတျနစေိတျထားတဈခုကတော့ သူတို့တှေ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျခဲ့တယျဆိုတာကို ဝနျခံကွပမေဲ့ သူတို့ဟာ မုဒိမျးကောငျတှပေါလို့ လကျမခံကွတာပါတဲ့။
ပွောခငျြတာကကှာ ရညျးစားဟောငျးပဲဖွဈဖွဈ၊ အီစီကလီလုပျနတေဲ့ ကောငျမလေးကိုဖွဈဖွဈ အကွမျးဖကျပွီး လိငျကိစ်စရယူလိုကျပမေဲ့ ဒါက မုဒိမျးမှုမွောကျတယျလို့ လကျမခံကွတာပါ။ သူကမူနလေို့ အတငျးရယူလိုကျရတယျ ဆိုတာမြိုး ဆငျခွပေေးကွတာပါ။
University of California က လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ရာဇဝတျမှုကို နှဈပေါငျမြားစှာ လလေ့ာခဲ့တဲ့ စိတျပညာရှငျ Neil Malamuth ကပွောတာကတော့ ထောငျကနြတေဲ့ ရာဇဝတျသားတှဟော ဘာလာလာဆိုတဲ့ လူမြိုးတှပေါတဲ့။ သူတို့ဟာ တီဗှီခိုးမယျ၊ လကျပတျနာရီခိုးမယျ၊ ကားခိုးမယျ အဲ့ကနမှေ လိငျကိစ်စကို ခိုးခငျြခိုးပါလိမျ့မယျ။ အဲ… တကယျ့လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ရာဇဝတျမှုကိုပဲ ကြူးလှနျတဲ့ မုဒိမျးကောငျတှကေတော့ ထောငျမကကြွတာ မြားပါတယျတဲ့။ ဒါကွောငျ့ပဲ သူတို့တှေ ပိုအတငျ့ရဲနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။
တက်ကသိုလျကြောငျးသားတှကေို အဓိကထားပွီး ကောကျထားတဲ့ စဈတမျးတဈခုအရတော့ အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပါပဲ မုဒိမျးကောငျတှဟော ခပျငယျငယျကတညျးက ဒီစရိုကျလက်ခဏာတှေ ပွကွပါတယျ။ သူတို့တှဟော အထကျတနျး (သို့မဟုတျ) တက်ကသိုလျနှဈအစောပိုငျးတှမှောကတညျးက လိငျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ ပတျသကျပွီး တဈပါးသူတှေ လကျမခံနိုငျတဲ့ အမူအကငျြ့တှကေို ပွကွပါတယျ။ ခဈြသူက ဆိတျကှယျရာချေါသှားပွီး အလိုမတူဘဲ ကိုငျတှယျတာမြိုး၊ ဘတျဈကားပျေါမှာ မဖှယျမရာ ထိတှမှေု့တှေ လုပျတာမြိုးပေါ့။ တခြို့ကတော့ တဈခါနှဈခါလောကျ အပွီးမှာ ရပျသှားကွပမေဲ့၊ တခြို့ကတော့ ဆကျလကျပွုမူတတျကွတယျ။ တခြို့မြားဆို ပိုလို့ အတငျ့ရဲလာပွီး မုဒိမျးကောငျဖွဈလာကွပါတယျ။
Related article >>> တှဈတာအသုံးပွုသူ မိနျးကလေးတဈယောကျပွောပွတဲ့ မုဒိမျးမှုအကွောငျး
Wayne State University က လူမှုစိတျပညာရှငျ Antonia Abbey ရဲ့သုတသေနတဈခုအရမှာ ထပျခါထပျခါ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျသူတဈယောကျက သူ့အပွုအမူကို ဒီလိုရှငျးပွထားပါတယျ –
“ကြှနျတော့ကို လိငျစိတျကွှလာအောငျ လုပျတဲ့အတှကျ သူ(မ)ကို ပွနျပေးဆပျခိုငျးတာပါ”
ဒီအကွောငျးပွခကျြကို ကွားဖူးနတေယျ မထငျမိဘူးလားဟငျ? ဘယျလောကျတောငျ အဓိပ်ပာယျမရှိပွီး ကွောကျစရာကောငျးလိုကျသလဲလို့… နောကျဆုံး ပွောခငျြတာက ယောငျးတို့ရယျ… လူဆိုးဆိုတာက ခြိုလညျးပေါကျမနေ၊ နဖူးမှာလညျး စာမရေးထားဘူးမလား… ဘယျအခြိနျ ဘယျနရော ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးမှာမဆို မုဒိမျးကောငျတှေ ရှိနတေတျပါတယျလို့…
အန်တရာယျကငျးပွီး လှပတဲ့ ဘဝလေးတှေ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
Tags: childhood, crime, Knowledge, Mindset, rape
လုပ်ငန်းခွင်စိတ်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျိုးတွေအများကြီး ရခဲ့ရတဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ "Women of Tomorrow-II"
အောက်လက်ငယ်သားတွေ မျက်မုန်းကျိုးလောက်တဲ့ ပါလေရာ မန်နေဂျာ ဖြစ်နေပြီလား
Ei Mon May 31, 2019